Ady amin'ny covid-19 :: Mihiboka tanteraka Analamanga • AoRaha
Manerana an’Analamanga no ampiharana ny fepetra hentitra noraisin’ny fanjakana, afak’omaly alina, noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 tao anatin’ny andro maromaro. Mihatra manomboka anio ny fihibohana tanteraka. Haharitra dimy ambin’ny folo andro, izany hoe hatramin’ny 20 jolay 2020 ireo fepetra mifanaraka amin’izao fanapahan-kevitra goavana mba hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina izao.
Fepetra voalohany noraisin’ny fitondram-panjakana ny fanakatonana tanteraka ny faritra Analamanga. Tsy misy intsony, araka ny voafaritra tao amin’ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra, ny fanomezana fahazoandalana hivezivezy na ho an’iza na iza. Ny fiarakaretsaka sisa no afaka hifamoivoy eto Antananarivo, saingy voafetra ho mpandeha telo ihany no entiny, sady arahin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny fiarovana amin’ny fifindran’ ny tsimok’aretina.
Mafy kokoa noho ny fihibohana voalohany nampiharina teto Madagasikara, tany am-boalohan’ny fotoana nampiakatra tsikelikely ny isan’ny olona voan’ny Covid19, izao fihibohana ho an’ Analamanga izao. Naverina indray ny famerana ny isan’ny olona mivoaka ny trano, amin’ny fiantsenana, ho iray ihany, manomboka amin’ny 7 ora maraina hatramin’ny 12 ora antoandro.
Asa sy fianarana
Mikatona avokoa vokatr’ izany ny asa aman-draharaha rehetra, hatramin’ny fianaran’ ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana, izay efa niverina an-tsekoly. « Ireo sampan- draharaha na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana izay tena ilaina ihany sisa no tokony hiasa », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, omaly.
Toy ny fanazavana teo aloha ny mikasika ny fanadinam-panjakana. Hodinihina sy hampahafantarina amin’ ny fotoana manaraka ireo datim-panadinana, araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra, izay natao tamin’ny fahitalavitra mivantana tany amin’ny toeram-piasan’ireo minisitra tsirairay, niaraka tamin’ny praiminisitra sy ny Filohan’ny Repoblika, afak’ omaly alina.
Narahina fanazavana isaky ny sehatra tsirairay ireo fepetra mihatra amin’izao fihibohana mandritra ny dimy ambin’ny folo andro ho an’ny faritra Analamanga izao. Efa niatrana kosa ireo mpitandro filaminana izay hiantoka ny fampanajana an’ireo fepetra ireo, satria niarahana nahita ny goragora teo aloha sady anisan’ny heverina ho fototra nampihanaka ny valanaretina teto Antananarivo.
Miandry ny lamina hapetraky ny fitondram-panjakana kosa ny fanomezana fanampiana an’ireo olona marefo noho ity fihibohana tanteraka tampoka ity.
Fihanaky ny valanaretina :: Olona roa matin’ny Covid-19, zato ireo marary vaovao